२० बैशाख २०७७, शनिबार ०९:४३
लोकपाटी टिप्पणी/२० वैशाख। गत साता एक जना मन्त्रीका प्रेस संयोजकले लेखे, ‘लकडाउनपछि बन्द गरिएको कान्तिपुर दैनिक प्रचण्डको आग्रहमा फेरि प्रकाशित गरिएको रहेछ।’ मिडियाप्रति सरकार कति असहिष्णु छ भन्ने कुराको यो एउटा दृष्टान्त मात्र हो।
स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि बारम्बार मिडियामाथि प्रहार गरिरहेका छन्। कुनै बेला मिडिया र पत्रकार जति सबै आफ्ना ठान्ने प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकटका नेताहरु पछिल्लो समय प्रेसमाथि नियमित हमला गरिरहेका छन्। शुक्रबार मे दिवसका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको सन्देशमा समेत उनले मिडियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
कुनै बेला मिडियामैत्री ठानिएका प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूह मिडियाप्रति किन यति धेरै पूर्वाग्रही छन् ? के मिडियाले आफ्नो व्यवसायिक धार बदलेर मिसन पत्रकारिता गरेकै हुन् त ? कि सरकारका कामकार्वाही र मिडियाप्रति गरिएका असहिष्णु निर्णय र सरकार जनमूखी हुन नसक्नुजस्ता विषयहरु जिम्मेवार छन् ? यतातिर प्रधानमन्त्री र उनको समर्थकको ध्यान गएको छैन।
पछिल्लो समय सिंगो देश नै सरकारप्रति उत्साहित छैन। सरकारले गरेका हरेक निर्णय विवादको घेरामा तानिँदा त्यसको प्रभाव सञ्चार जगतमा पनि पर्ने गरेको छ। मूख्यतः मिडिया काउन्सिल विधेयकका कारण पत्रकारहरु सरकारसँग झस्किए। आफ्ना विरोधीलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा तह लगाउने सरकारको सोंचबाट झस्किएको सञ्चार क्षेत्र अहिले पनि सरकारसँग विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन।
सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्रीको आक्रोश मिडियाले प्रयोग गर्ने तिमी शब्दप्रति थियो। यसलाई उनले प्रतिष्ठाको विषय बनाउन खोजेको देखिन्छ, जबकि यसअघिका कुनै पनि सरकार र प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा खास टिप्पणी गरेका थिएनन्। ‘पत्रकारले आफ्नी आमालाई पनि तपाई भन्दैनन्’ भन्ने टिप्पणीको सामाजिक सञ्जालमा कटाक्षसमेत भयो।
कतिले संविधानका विभिन्न धाराको उल्लेख गर्दै संविधानमा राष्ट्रपतिलाई नै ‘तँ’ भनिएको रहेछ भन्नेसम्मका कटाक्ष गरे। मिडियाले साना–ठूला सबैलाई समान रुपमा सम्बोधन गर्ने र त्यसका लागि तिमी शब्द नै सबैभन्दा उपयुक्त भएको तथ्य प्रधानमन्त्रीले बुझेनन् वा बुझेर पनि ‘म आफू अरुभन्दा विशेष हुँ’ भन्ने दम्भ पाले। तर, उनको कटाक्षले उनकै तौल घटायो।
केही साताअघि ओलीनिकटका नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा मिडियाको नामै तोकेर ‘यी मिडिया फलानोका हुन्, यी मिडिया नहेर्नु, नपढ्नु’ भन्नेसम्मको उर्दी जारी गरिएका घटनाक्रमले देखाउँछ, ‘प्रधानमन्त्रीले सक्थे भने आफ्नो समर्थन नगर्ने सबै मिडिया बन्द गराउन चाहन्छन्।’
त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो – काठमाडौं प्रेसका प्रकाशित समाचार साइट नै ह्याक गरेर हटाइएको घटना। प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि विज्ञ असगर अलीले साइट नै ह्याक गरेर आफूविरुद्ध लेखेको समाचार हटाएका थिए। धेरैको अनुमान थियो, ‘ओलीले अलीलाई हटाउँछन्।’ तर, उल्टै उनको प्रतिरक्षा भयो। यसले पनि ओली मिडियाप्रति कति क्रुद्ध छन् भन्ने कुरा बुझ्न मद्दत मिल्छ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पहलमा केही अनलाइन मिडियामा लगानी गरेका छन्। ती मिडियामार्फत् आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने उनको योजना छ। ती मिडियालाई उनले तपाई शब्दले सम्बोधन गर्न उर्दी जारी गरेका छन्। जुन उर्दी उनीहरुले ‘फलो’ पनि गरिरहेका छन्। तर, बहुसंख्यक मिडियालाई गाली गरेर ओलीले कसरी आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न सक्छन् ? यतातिर भने उनी र उनको टीमले सोचेको देखिँदैन।
प्रचलित भाषा छ, ‘मिडिया वाच डग हो।’ यसले सरकारका कामको आलोचनात्मक समीक्षा गर्छ र गर्नुपर्छ। तर, प्रधानमन्त्री ओली सरकारको समीक्षा रुचाउँदैनन्। उनी आफ्ना हरेक गतिविधिको निशर्त समर्थनको अपेक्षा र आग्रह राख्दछन्, जुन कुरा लोककल्याणकारी राज्यमा असम्भव मात्र होइन, अनुत्पादक पनि हुन्छ।
पूँजीवादी मुलूकहरुले सरकारका कमजोरी औल्याउन ‘तलबी आलोचक’ नै राख्ने गरेका थुप्रै दृष्टान्तहरु छन्। त्यसको उद्देश्य हो, ‘सरकारका कामको आलोचना र समीक्षा होस्, त्यसकै जगमा टेकेर सरकारले आफ्नो नीतिमा परिमार्जन गर्न सकोस् र सरकारलाई जनतामा थप स्थापित गर्न सकियोस्।’
तर, हामीकहाँ ठीक उल्टो देखिन्छ। सरकारको बुझाइ छ, ‘आलोचनाले सरकारलाई फाइदा गर्दैन। तसर्थ, आलोचना नै गलत छ।’ यसले सरकार एकपछि अर्को विवादको घेरामा तानिएको छ। मूख्यतः सरकारले मिडियालाई ‘वाच डग’ नभई मूखपत्र बनाउन खोज्दा त्यही सोंचको पासोमा आफै पर्दै गइरहेको देखिन्छ।